July 4, 2020 886
नेपालमा शनि’बार थप २३२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सँगै कोरोना संक्रमि’तको संख्या १५ हजार ४९१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शनिबार नियमित ला’इभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
डा गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोग’शाला काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा १ सय १४ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । उनीहरु मध्ये अछामका ३७ जना, डडेल्धु’राका ३ जनामा को’रोना पुष्टी भएको छ ।
डोटीका ३ जना, गुल्मीका ९ जना, अंचनपु’रका ६ जना, नवलपरासीका ४ जना, पाल्पाका १६ जना, प्युुठानका ६ जना, रुपन्देहीका ४ जना, सर्ला’हीका १६ जना र सिन्धुपाल्चोकका १२ जना रहेका छन् ।
यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा’नमा गरिएको परीक्षणमा ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनी’हरु मध्ये मोरङका एकजना र सिराहाका ६ जना रहेका छन् ।
यस्तै कोशी अस्पताल विराट’नगरमा गरिएको परीक्षणमा ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये इलाम’का एकजना, झापाका एकजना र मोरङका ५ जना छन् ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटन’गरमा गरिएको परीक्षणमा ४ जनामा ‘पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु सबै जना झापाका हुन् । यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजवि’राटमा गरिएको परीक्षणमा ५१ जनामा पोजे’टिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये सप्तरीका ३६ जना र सिराहाका १५ जना रहेका छन् ।
डा गौतमका अनुसार प्रादे&शिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ज’नकपुरमा १५ जनामा कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु सबै धनुषाका हुन् । यस्तै भरतपुर अस्प’तालको प्रयोगशा’लामा गरिएको परीक्षणमा १३ जनाको कोरोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये’ चितवनका ६ जना र नवलपरासी पुर्वका ७ जना छन् ।
प्रादेशिक क्षय’रोग केन्द्र पोखरामा गरिएको परीक्षणमा ८ जनामा को’रोना पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये बाग्लुङका ३ जना, म्याग्दीका ३ जना, स्याङ्जाका एकजना र तनुहँका एक’जना रहेका छन् ।
यस्तै प्रादेशिक जनस्वा’स्थ्य प्रयोगशाला रुपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा ५ जनामा पोजे’टिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये पाल्पा’का ३ जना र प्युठानका २ जना रहेका छन् ।
यस्तै भेरी अस्पताल नेपाल’गंजमा गरिएको परीक्षणमा ७ जनामा पोजेटिभ आएको छ । उनीहरु मध्ये बाँ’केका ५ जना र रोल्पाका २ जना रहेका छन् । यस्तै दैलेख प्रयोग’शालामा दैलेखका एकजनामा पोजेटिभ आएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमित’को संख्या १५ हजार ४९१ पुगे’को मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
२४ घण्टामा २७२ जना डिस्चार्ज भए
डा गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २७२ जना निको भएर अस्पताल’बाट डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै ने’पालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म ६४१५ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनु’सार नेपालमा हालसम्म ७७ जिल्लामा को’रोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ भने कोरोनाका कारण ज्या’न गुमाउनेको संख्या ३४ पुगेको छ । – खबर हब ( फाइल तस्बिर)
Prevभुवनलाई लाग्यो फेरि अर्को आरोप! स्वेताले पनि ‘स्कृन सट’ सार्वज’निक गर्दै खो’लिन् पोल (भिडियोसहित)
Nextनेपालमा आज कोरोनाको कारण थप २ जनाको मृत्यु, मृ’त्यु हुने कहाँ कहाँका ? हेर्नुहोस्…
रचना रिमालको आवाजमा मनछुने गित…(भिडियोसहित).. हेर्नुहोस्